Tuesday April 03, 2018 - 17:15:44 in Wararka by Super Admin
Dhaxal sugaha Maamulka Aala sacuud ayaa ku dhawaaqay in uu ogolyahay sii heysashada Yahuudda ee dhulalka Muslimiinta Filasdiin.
Max'med Bin Salmaan oo ah dhaxal sugaha maamulka Daaquudka Aala Sacuud ee kajira dhulka Xamareynka ayaa ku dhawaaqay in maamulkiisu aqoonsanyahay waxa loogu yeero dowladda Yahuudda ee xoogga ku heysata dhulalka Falasdiin oo uu kamid yahay Masjidka Barakeysan ee Al-aqsaa.
Wareysi uu siiyay Majaladda Atlantic ee laga leeyahay dalka Mareykanka ayuu ku sheegay in ay ogolyihiin dadka Yahuudda ay sii heystaan dhulalka muslimiinta Filasdiin isagoo muujiyay in Al-asacuud aysan wax cadaawad ah kala dhaxayn maamulka Yahuudda.
"Israa'iiliyiintu xaq ayay uleeyihiin in ay yeeshaan waddan waxaan aaminsanahay in shacab walba xaq uleeyahay in uu nabad ugu noolaado wadankiisa"ayuu yiri Max'med Bin Salmaan oo ah shakhsiga ugu awoodda badan maamulka Sacuudiga.
Mar wax laga weydiiyay sida ay ku suurta gelayso in Yahuudda iyo Filasdiiniyiinta ay hal meel kuwada noolaadaan ayuu ku jawaabay "waxaan rumeysanahay in Falasdiiniyiinta iyo israa'iiliyiinta ay xaq uleeyihiin yeelashada dhulal khaas u ah" .
Dhaxal sugaha Aala Sacuud wuxuu muujiyay sida dowladaha dawaaqiidda Khaliijka ay u doonayaan dib usoo celinta cilaaqaadkii kala dhaxeeyay waxa loogu yeero maamulka Israa'iil ee xoogga ku jooga Mandiqadda shaam, wuxuu sheegay in ay baahi uqabaan cilaaqaad ay yeeshaan sacuudiga iyo yahuudda.
Wareysiga usiiyay Majaladda Atlantic ayuu Bin Salmaan markii ugu horraysay ku muujiyay in uu ku qanacsanyahay waxna ka ogaa go'aankii Trump uu soo saaray sanaddii lasoo dhaafay ee uu magaalada Qudus ugu aqoonsaday caasimadda Yahuudda.
Wuxuu ku celceliyay intii wareysigiisu socday caadiyaynta cilaaqaadka udhaxeeya dowladaha dawaaqiidda khaliijka iyo Yahuudda iyo in uu ogolyahay in cadawgu sii heysto dhulalka Filasdiin.
Bishii lasoo dhaafay wareysi uu siiyay shabakadad CBS News ee dalka Mareykanka Mareykanka ayuu uga leex leexday in uu ka jawaabo su'aalo laga weydiiyay mowqifkiisa ku aaddan qaraarkii Trump ee uu caasimadda israa'iill ugu aqoonsaday caasimadda yahuudda.
Dhaxal sugaha Aala Sacuud ayaa socdaal uu ku marayo Mareykanka wuxuu lacago Boqolala Bilyan oo dollar ah ugu yaboohay Donald Trump madaxweynaha Mareykanka.
Bin Salmaan ayaa dhowr mar sheegay in uu nidaam calmaani ah kusoo rogi doono dhulka Xarameynka isagoo jeelasha udhaadhiciyay kumanaan kamid ah culimaa'udiinka xaqqa lajahra isagoona ugoodiyay dhammaan dadka diidan dhaqankiisa gaalnimada ah.
Dad Shacab ah oo lagu laayay Deegaanka Xaawa Cabdi Ee Duleedka Muqdisho.